အီရန် နူကလီးယား သဘောတူညီချက်၏ ကတိကဝတ်ကို အမေရိကန် နားလည် လက်ခံရန်လိုဟု ရုရှားပြော - Yangon Media Group
မော်စကို၊ ဇန်နဝါရီ ၁၆
အမေရိကန်အနေဖြင့် အီရန်နျူကလီးယားသဘောတူညီချက်၏ ပကတိအခြေအနေကို နားလည်လက်ခံပေးရန် လိုအပ်သည်ဟု ရုရှားနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီး ဆာဂျီလက်ဗရော့ဗ်က ပြောကြားလိုက်ကြောင်း ဇန်နဝါရီ ၁၆ ရက် ဆင်ဟွာသတင်းကဆိုသည်။
”တကယ့်အခြေအနေကို အမေရိကန် နားလည်လက်ခံလာပါ စေဆိုတဲ့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့ ကျွန်တော်တို့ ဆက်ပြီးလုပ်သွားမှာပါ”ဟု လက်ဗရော့ဗ်က သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲတွင်ပြောသည်။ နျူကလီးယား သဘောတူညီချက်ကို ဖျက်သိမ်းမည်ဟု အမေရိကန်ကခြိမ်းခြောက် ဖိအားပေးနေမှုများကြောင့် အကောင်းမြင်မှုတိုးမလာသလို တည်ငြိမ်မှုလည်းတိုးမလာကြောင်း လက်ဗရော့ဗ်က ပြောသည်။
အမေရိကန်သမ္မတ ဒေါ်နယ်ထရန့်က အီရန်နျူကလီးယား သဘောတူညီချက်တွင် ကြီးလေးသောချို့ယွင်းချက်များ ရှိနေကြောင်း၊ ထိုချို့ ယွင်းချက်များကို မပြင်ဆင်ပါက အမေရိကန်အနေဖြင့် သဘောတူ ညီချက်မှ နုတ်ထွက်ကာ အီရန်အပေါ် ဆန်ရှင်များပြန်လည်ချမှတ်သွားမည်ဖြစ်ကြောင်း ပြောသည်။ ထိုသဘောတူညီချက်သည် အီရန်နျူကလီးယားဗုံးရရှိမသွား စေရန် ဟန့်တားနိုင်စွမ်းမရှိကြောင်း၊ ပဲ့ထိန်းဒုံးကျည်များကို အကန့် အသက်မဲ့ စမ်းသပ်ထုတ်လုပ်ခွင့်ပေးထားခြင်းမှာလည်း လုံးဝမဖြစ် သင့်ကြောင်း ဒေါ်နယ်ထရန့်က ဝေဖန်ပြောဆိုထားသည်။
အမေရိကန်အနေဖြင့် အီရန်နျူကလီးယားသဘောတူညီချက်မှ နုတ်ထွက်ပါက အန္တရာယ်အလွန်ကြီးမားကြောင်း၊ မြောက်ကိုရီးယားကလည်း အမေရိကန်ကို လုံးဝအယုံအကြည်ရှိတော့မည်မဟုတ်ကြောင်း၊ မြောက်ကိုရီးယားနှင့် တွေ့ဆုံဆွေးနွေးညှိနှိုင်းရန် အလွန်ခက်ခဲသွား မည်ဖြစ်ကြောင်း လက်ဗရော့ဗ်ကပြောသည်။ အမေရိကန်၏မဟာမိတ် ဥရောပနိုင်ငံများ၏သဘောထားကိုမူ မိမိမသိရသေးကြောင်း၊ သို့သော် ဥရောပနိုင်ငံများအနေဖြင့် နျူကလီးယားသဘောတူညီချက်ကို ဆက်လက်ထောက်ခံမည်ဟု မျှော်လင့် ကြောင်း လက်ဗရော့ဗ်က ပြောသည်။
ဘင်္ဂါလီများကို နှစ်နှစ်အတွင်း အပြီးပြန်ပို့ရန် မြန်မာနှင့် သဘောတူညီမှု ရပြီဟု ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ် ??
တရုတ်အဝယ် မရှိဘဲ ရန်ကုန်ဈေးကွက်သာရှိ၍ အိတ်စ်ပို့ ၂၅ မတ်ဆန် ဈေးထိုးဆင်း စပါးဈေးပါ ဆက်စပ??
ဆိုမာလီယာတွင် အသေခံ ဗုံးခွဲတိုက်ခိုက်မှုကြောင့် အစိုးရ ဒု-ဝန်ကြီးနှင့် အကြမ်းဖက်သမား လေးဦ?
RSF ၏ မြန်မာသတင်းမီဒီယာ လွတ်လပ်ခွင့် အစီရင်ခံစာပါ ဆိုလိုချက်များအပေါ် ငြင်းဆိုဖွယ် မရှိကြောင??
ထိုင်း တက္ကသိုလ်ဝင်ခွင့် ရွေးချယ်ရေး စနစ်ကို ကျောင်းသား မိဘများဝေဖန်